Chelsea Oo Raadis Ugu Jirta Cid Ka Iibsata Timo Werner Iyo Kooxda Uu Doonaya Inuu Ku Biiro Oo La Ogaaday – Garsoore Sports
Chelsea Oo Raadis…
Weeraryahanka kooxda Chelsea Timo Werner ayaa xiiseynaya inuu ku biiro kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich, sida lagu sheegay warbixin.
Bayern ayaa indhaha ku heysa ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Jarmalka iyagoo raadinaya beddelka Robert Lewandowski iyadoo weeraryahanka reer Poland, uu haatan yahay 32 jir ah xilli qandaraaskiisa Bavaria uu ku egyahay ilaa 2023 waxaana ay tahay inay hadda ama hadhoowba ay ahaato inaanay isku haleeynin xiddigan oo ay keensadaan xiddigo tartan gelin kara amaba marka uu waqtigiisa Bavaria dhammaado beddel sax ah u noqon kara.
Sida ay warineyso majaladda Football.Insider kooxda Bayern Munich ayaa xiiso u muujineysa saxiixa xiddiga Jarmalka ee 26 jirka ah.
Werner wuxuu ku guuldareystay inuu saameyn wanaagsan ku yeesho Chelsea xilli ciyaareedkii hore kaddib markii uu ugu yimid lacag ku dhow £ 45m xagaagii hore iyadoo weeraryahanka xawaaraha badan lagu waday inuu awood u leeyahay inuuu isku qarxiyo masraxyadda kubbada-cagta Ingiiriiska.
Wuxuu ku dhammeystay ololihii hore 12 gool wuxuuna caawiyay 15 kale 52 kulan oo tartamada oo dhan ah inkastoo goolasha uu dhalin waayay ay ka badanyihiin kuwa uu dhaliyay haddii dabcan loo xisaabiyo.
Si kastaba ha noqotee, Thomas Tuchel kuma qancin isaga waxaana la fahamsan yahay in kooxdu ay raadineysay inay iska fasaxdo xiddigan.
Sida laga soo xigtay Sky Germany, Chelsea ayaa weydiisaneysay inay eegto haddii uu jiro qof doonaya inuu Werner kala wareego suuqa kala iibsiga xagaagan balse warbixinta ayaa lagu sheegay in naadiga aysan si firfircoon u raadineeynin iibsade, laakiin ay raadinayaan ‘fursad ku habboon’.
Iibinta Werner ma ahan ‘mid qasab ah’ maadaama macalin Tuchel iyo maamulka kooxda la sheegay inay wali ‘ku qamaartamayaan’ ciyaaryahanka iyagoo filaya in laga yaabo inuu bandhigyo wanaagsan la yimaado xilli ciyaareedka soo socda.
Tuchel wuxuu isha ku hayaa imaatinka xiddig weyn ee cajiib ah iyadoo Erling Haaland lagu sheegay inay doorbidayaan.
Weeraryahanka Tottenham Harry Kane iyo kan Inter Milan ee Romelu Lukaku ayaa sidoo kale la tixgelinayaa, sidoo kale weeraryahanka Stuttgart ee Sasa Kalajdzic.
Werner wuxuu isna xiiseeynaya inuu ku biiro kooxda Jarmalka ee Bayern halka macalinka kooxdaasi ee Julian Nagelsmann la sheegay inuu taageere weyn u yahay xiddigan maadaama ay waqti quruxbadan kusoo wada qaateen kooxda RB Liepzig.
Liverpool Oo Laga Soo Diiday Dalab 100 milyan Oo Ay Ka Gudbisay Chiesa